ए मेरो हजुरअघि फिल्म छाडेर जागिर गरूँ जस्तो लाग्थ्यो : अभिनेत्री झरना थापा - Naya Patrika
नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ | भदौ २६, २०७४
अभिनेत्री हुँदै ‘ए मेरो हजुर–२’बाट निर्देशकका रूपमा डेब्यु गरेकी झरना थापा अहिले पुलकित छिन् । १६ भदौबाट प्रदर्शनरत ए मेरो हजुर–२ ले हाल दोस्रो सातामा पनि दर्शकको साथ उत्तिकै उत्साहजनक पाइरहेको छ । झन्डै सवा एक सय फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी झरनाले ए मेरो हजुर–२ मा भने विशुद्ध निर्देशकको जिम्मेवारी मात्र निर्वाह गरेकी छिन् । अर्थात्, फिल्ममा उनले अभिनय गरेकी छैनन् । उनलाई फिल्म रिलिजअघि सफलता–असफलताको त्रास निकै लागेको थियो रे । अरू केके भएको थियो ? झरनासँग नयाँ पत्रिकाका लक्ष्मण सुवेदीले गरेको कुराकानीः
फिल्म निर्देशकका रूपमा पनि तपार्इंलाई सफलता प्राप्त भयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
म एकदम खुसी छु । रिलिजअघिसम्म मलाई मनमा कता–कता डर लागेको थियो, केही गरी हलमा दर्शक आएनन् भने त चौपट हुन्छ भन्ने त्रास थियो । तर, जब प्रिमियर सोबाट सबैको तारिफ पाएँ, त्यसपछि भने फिल्म चल्छ भन्ने विश्वास बढेर गयो । मलाई फिल्म चल्छ भन्ने त पहिला नै थाहा थियो । तर, यत्तिको चल्ला भन्नेचाहिँ सोचेकी पनि थिइनँ । म सबैको साथ र सहयोगले सफल भएकी छु । यो खुसीलाई सधँै कायम राख्ने कोसिस गर्नेछु ।
तपाईंहरूले श्रीकृष्ण श्रेष्ठ जीवित छँदै ‘ए मेरो हजुर–२’ निर्माण गर्ने चर्चा चलेको थियो नि ?
हो, त्यतिवेलै हामी ए मेरो हजुर–२ निर्माण गर्ने योजनामा पुगेका थियौँ । श्रीकृष्ण दाइसँग अनौपचारिक रूपमा कुराकानी पनि भएको थियो । तर, त्यतिवेला म पनि व्यस्त थिएँ । दाइ पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँलाई लिएर ए मेरो हजुरको सिक्वेल बनाउने सपना पूरा भएन । तर, पनि ए मेरो हजुर–२ भित्र हामीले श्रीकृष्ण दाइको झल्को प्रस्तुत गरेका छाँै । श्री दाइ भइदिएको भए यो फिल्मको कथा अर्कै हुने थियो । म पनि फिल्ममा देखिने थिएँ ।
ए मेरो हजुर–२ मा पहिला अनमोल केसी थिए, तपार्इंहरूले हङकङमा अनमोलसहित फिल्म घोषणा गर्नुभएको थियो । पछि, फिल्ममा अनमोल रहेनन्, खास कारण के हो ?
हो, ए मेरो हजुर–२ मा पहिला अनमोल थिए । हङकङमा सम्पन्न नेफ्टा अवार्ड सेरोमोनीमा हामीले अनमोलसहित फिल्मको घोषणा गरेका थियौँ । त्यतिवेला अनमोलको होम प्रोडक्सनको ‘ड्रिम्स’ प्रदर्शन हुने क्रममा थियो । ड्रिम्स रिलिजसँगै हाम्रो फिल्म सुटिङ गर्ने तयारी थियो । तर, उनी ड्रिम्स सो गर्नका लागि विदेश जानुपर्ने भएकाले पाँच–सात महिना समय दिन नसक्ने बताए । हामीले उनलाई त्यत्तिका महिना कुर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण सहमतिमै अनमोल बाहिरिएका हुन् । अनमोलले नभ्याउने भएपछि हामीले सलिनमान बनियाँलाई डेब्यु गराएका हौँ । अनमोलबाहेक हामीले अरू कसैलाई अफर गरेनाँै ।
तपाईंले सधैँ सिनियर कलाकारसँग काम गरिरहनुभएको थियो, तर तपार्इंको फिल्ममा नव–युवायुवतीको बाहुल्य छ, कहिलेकाहीँ लागेन, केटाकेटीलाई लिएर म यो के गर्दै छु ?
हाम्रो फिल्मको स्क्रिप्टले नै भर्खरका युवायुवती मागेकाले मलाई कहिल्यै त्यस्तो लागेन । म सधँै सिनियर कलाकारसँग काम गरिरहेकी थिएँ । त्यसकारण नयाँ युवायुवतीलाई मात्र लिएर फिल्म गर्दा के होला भन्ने कुतूहलचाहिँ थियो । तर, डर भने कत्ति पनि लागेको थिएन । फिल्मका मुख्य कलाकारमा सलोन, बुद्धि तामाङ मात्रै त पुराना थिए नि ! सलोनसँग त बच्चैदेखि काम गरेकी हुँ । साम्राज्ञीले एउटा मात्रै फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । सलिनमानले त कहिल्यै फिल्म गरेका थिएनन् । तर, पनि मलाई कहिल्यै गल्ती गरेँ कि भन्ने लागेन । मलाई आफ्नो फिल्मको विषयवस्तु र कलाकारमा विश्वास थियो । त्यसकारण कहिल्यै थकथकी मान्नुपर्ने पल आएन ।
कहिल्यै अभिनय नगरेका सलिनमानलाई काम गराउन असहज भएन ?
हामीले सलिनमानलाई डेब्यु गराउने भएपछि झन्डै चार महिना वर्कसप चलायौँ । वर्कसपमा उनले फिल्मसम्बन्धी थुप्रै कुरा जान्ने, बुझ्ने अवसर पाए । म, बुद्धि तामाङलगायतले हाम्रो फिल्मका कलाकारलाई अभिनय, प्रस्तुतिबारे सिकायाैँ, बुझायौँ । सुरुका दिनमा सलिनमान अलि खुल्न सकेनन् । पछि–पछि उनले आफूलाई निकै सुधारेर लगे । त्यसकारण सुटिङमा समस्या भएन । आवश्यक कुराको पहिला नै जानकारी भएकाले सबैले निकै खुलेर काम गरे । त्यो पर्दामा देखिएकै छ नि !
तपाईं आफूलाई सानो भए पनि भूमिका निर्वाह गरूँ भन्ने लागेन ?
होइन, म निर्देशनमा मात्रै केन्द्रित थिएँ । त्यसैले मैले यो फिल्ममा अभिनय गर्ने बारेमा सोच्दै सोचिनँ । तर, मलाई फिल्ममा रहेको ‘किनी देउन साइँला दाइ’ गीतमा भने लोभ लागेको थियो । ‘मुग्लान’ फिल्मको ‘आज बाह्र हाते पटुकी’, ‘जीवनसाथी’ फिल्मको ‘आँखैमा सपनी छ’जस्ता हिट गीतमा मैले नृत्य गरेकीले यो पनि मेरो टाइपको गीत लागेको हो । तर, आफैँ नाचूँ भन्नेचाहिँ लागेन ।
ए मेरो हजुरदेखि ए मेरो हजुर–२ सम्म आइपुग्दा आफ्नो सोच, योजना र शैलीमा आएको परिवर्तन के पाउनुहुन्छ ?
धेरै कुरामा परिवर्तन पाउँछु, म । खासमा ए मेरो हजुरमा अभिनय गरेपछि मात्रै म फिल्ममै करिअर बनाउँछु भन्ने निर्णयमा पुगेकी हुँ । त्यसअघि अभिनय गरेका फिल्ममा त व्यावसायिक सफलता पाए पनि मेरो अभिनयको भने उत्तिसाह्रो चर्चा हुने गरेको थिएन । तर, जब मैले ए मेरो हजुरमा अभिनय गरेँ, दर्शक, फिल्मकर्मी, सञ्चारकर्मी सबैले मेरो अभिनयको तारिफ गर्नुभयो । त्यसभन्दा अघि मलाई म अभिनय गर्न सक्दिनँ । फिल्ममा मेरो करिअर बन्दैन, फिल्मका लागि म उपयुक्त छैन भन्ने लागेको थियो । त्यतिवेला मलाई फिल्म छाडेर कुनै बिजनेस गरूँ कि, कतै जागिर गरूँ कि भन्नेसम्मको सोच आउँथ्यो । तर, ए मेरो हजुरको सफलताले मेरो सोच बदलिदियो । त्यसपछि नै म व्यावसायिक रूपमा फिल्म अभिनयमा लागेकी हुँ । अहिले आएर ए मेरो हजुर–२ ले मलाई निर्देशकका रूपमा अर्काे पाइला अघि बढाउने हौसला दिएको छ । अब म निरन्तर रूपमा फिल्म निर्देशन गर्छु । मेरो कर्म नै फिल्मकारिता हो ।
अहिले फिल्म दोस्रो सातामा सफलताका साथ प्रदर्शन भइरहेको छ । पहिलो साताको व्यापारले हाम्रो लगानी उठिसकेको छ । अहिले नाफामा चलिरहेको छ । फिल्म रिलिज सकिएपछि अर्काे फिल्मको तयारीमा लाग्छु ।